COLAADA SOOL HADAL KELIYA UMA BAAHNA.Hadaad Aragto Colaad Soo Noq-noqota,Waxaa Jira Sababo/Cilado Aan Daawadeedii La Gaadhin | Lughaya.Com
COLAADA SOOL HADAL KELIYA UMA BAAHNA.Hadaad Aragto Colaad Soo Noq-noqota,Waxaa Jira Sababo/Cilado Aan Daawadeedii La Gaadhin
shariicada iyo kutubka waxaa loo soo dejiyey in lagu noolaado,la isku dhaqo lagu kala baydho,haddii laga leexdo waxaa timaada xayawaanimo,iyo hortaa bannaan,markaas ayaa ciqaabka Rabbina soo degaa(abaaro,colaado,cudurro) waxa keliya ee laga bixi karaa waa tawbad iyo dariiqii saxda ahaa oo lagu noqdo.
Colaadaha inta badan soo noq-noqda waxaa ugu weyn ee dabada ka riixa waa dhibanihi la dulmiyey oo aan xawqiisii helin, dulmigii iyo jawrkii oo aan la suulin iyo daalimkii oo aan wax ciqaaba la kulmin.colaadaha sool ka dhacaa waa kuwa ugu xun waxa lagu dilaa haldoorka.
Colaadda sool iyo kuwa kale ee la mid ka ah waxaa lagu joojin karaa arrimahaas aan kor ku soo xusnay oo la zuuliyo.
waxayna ku imanaysaa :
1.Dadka wax gaadheen oo xaqooda la siiyo qof kasta ee aanay noqon dulmane xaqiisii lagu beego dulmane kale oo labadaba la duudsiyo.
2.mushkiladaha qarsoon oo xal waara laga gaadho,hadday jiraan.
3.marka heshiis la galo shaqsiga jebiya waa in laga yeesho go’aamo adag oo aan cidina ku dhici karin fal kale waxaa ka mid noqon karta ama ugu fiican,in qofka la dilo magtiisa la bixiyo kan wax dilayna dil lagu xukumo halla qabto ayaa ha maqnaado,tani waxay keenaysaa in qof waliba gaarkiisa u baqo,nabad dambana ma jabi karto insha Allaah.